Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguRural Retreats
URural Retreats unezimvo eziyi-1492 zezinye iindawo.
I-Long Meadow Barn yindawo enomtsalane, ebanzi, evaliweyo eguquliweyo ebekwe kwilali yaseDown St. Yeyona ndawo ifanelekileyo, ikhuselekile, indawo yokuhlala yasemaphandleni isetiwe ngaphakathi kwegadi yayo kwaye okwangoku ifikeleleka lula kwiCrediton okanye i-Exeter. Indawo yasemaphandleni ejikelezileyo ikulungele ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile kunye negalufa kunye ne-Waterbridge Golf Course engaphantsi kweemayile. I-Two Moors Way inqumla e-Down St. Mary njengoko zisenza iindlela ezahlukeneyo zeenyawo zoluntu. Ukuloba kukwafumaneka ekuhlaleni.
Kukho ii-pubs ezininzi zelizwe lasekhaya kwiilali ezijikelezileyo, ekufutshane yi-Devonshire Dumpling yesiqingatha semayile, uhambo olufutshane, olubonelela ngokutya okugqwesileyo. ICopplestone, kumgama weemayile, inevenkile ebanzi kunye neposi apho amalungiselelo anokuthengwa. ICrediton ikumgama oziikhilomitha ezisixhenxe apho kukho iindawo zokutyela zaseIndiya ezibonelela ngenkonzo yasekhaya, indawo yokuthatha yaseTshayina, iziko lokuzonwabisa elinedama lokuqubha likawonke-wonke, iTesco enkulu kunye neMorrisons encinci.
Ilali yaseZeal Monachorum, kumgama oziikhilomitha ezimbalwa, ine-pub kunye neziko elincinci lokuzonwabisa elibonelela ngedama lokuqubha langaphakathi, kunye nendawo enkulu yokudlala yabantwana yangaphakathi nangaphandle elungele yonke iminyaka elungele ezo ntsuku zemvula. kunye ne-skittles kunye ne-snooker, konke oku kuya konwabisa usapho lonke, kunye nokutya okumnandi.
Le cottage yeholide ngokujonga nje
Kulala iindwendwe ezisixhenxe.
Amagumbi okulala amane, amagumbi amabini okuhlambela een-suite kunye negumbi lokuhlambela losapho elinye.
Isitovu sokutshisa iinkuni.
Isitiya esivalwe ngokupheleleyo, sikhuselekile kubantwana.
Indawo yokupaka eyaneleyo.
Uxolo, akukho zilwanyana zasekhaya.
Ubuncinci bokuhlala ubusuku obubini.
Isipheki soluhlu lwegesi / yombane ephindwe kabini. Ifriji / isikhenkcisi saseMelika, imicrowave, isitya sokuhlamba izitya.
Umatshini wokuhlamba, i-tumble dryer.
IiTV ekhitshini nakwigumbi lokuhlala, iDVD, unomathotholo.
Ibhedi, ikhuko lokuhamba, isitulo esiphezulu, isango lezinyuko kunye nesikhuseli somlilo ziyafumaneka xa uceliwe.
Inyathelo elincinci ukusuka kwigumbi lokuhlala ukuya eholweni, ukusuka eholweni ukuya ekhitshini nakwindawo yokuhlala ephezulu.
Ifenitshala yegadi kunye nebarbecue.
Iindawo ezinomtsalane kunye nezinto ezikufutshane
Isixeko esinembali yecathedral yase-Exeter, iikhilomitha ezintlanu kude, sithengisa izinto ezintle kunye neendawo zokutyela ezininzi ezigqwesileyo. Ukhenketho lokujonga luyafumaneka okanye ungaphonononga iCathedral, iipaseji ezingaphantsi komhlaba okanye undwendwele iNorthcott Theatre okanye iicinema.
Ipaki yeSizwe yaseDartmoor imalunga neekhilomitha ezili-10 ukusuka kwindawo enomtsalane apho unokuhamba khona kwaye ujonge amaphandle kunye neendawo zelifa lemveli.
Kukwakho nezakhiwo zeNational Trust zokuphonononga kumgama olula wokuqhuba njengeCastle Drogo, iRosemoor kunye neKnighthayes ezibonelela ngeegadi ezintle kunye nendlu enika umdla.
Ukusuka kwisikhululo seNdlela iMorchard, isiqingatha semayile kude, oololiwe baseTarka Line baqhuba bebonelela ngeehambo ezininzi ukusuka kwizikhululo ezininzi ezisendleleni.
Kwimizuzu engama-40 yokuqhuba, kukho iilwandle ezintle zesanti kumanxweme asemantla nakumazantsi abonelela ngeenqanawa, ukusefa okugqwesileyo kunye neminye imidlalo yasemanzini.
Ukuloba kuyafumaneka kufutshane.
Ikhosi yegalufa kunye nendlu yeklabhu engaphantsi kwekhilomitha.
Iziko lokuzonwabisa eCrediton elibandakanya ichibi lokuqubha.
Iziko elincinci lokuzonwabisa eZeal Monachorum (iikhilomitha ezi-2 kude) kunye nephuli yokuqubha, ngaphandle kunye nendawo yokudlala yangaphakathi kunye nokunye okuninzi.
Iindlela ezininzi zeenyawo zoluntu ezibandakanya i-3 Moors Way.
I-Exeter ikumgama oziikhilomitha ezili-15 njengendawo yokutyela ebalaseleyo, itonela engaphantsi komhlaba kunye neCathedral.
Indawo zokutyela ezigqwesileyo.
Igumbi lokulala elinamawele amabini elineebhedi ezi-2 x 3' eziya kuthi ziguqulelwe kwi-zip eyi-6' kunye nebhedi edibeneyo xa iceliwe.
Izimvo eziyi-1 497
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Down St Mary, Crediton